अब युएससीआईएसमा एसाइलम अन्तरवार्तामा जाँदा नेपाली लगायतका ४७ वटा भाषा बोल्नेहरुले अनुवादक लैजान नपर्ने भएको छ । त्यस्ता नेपाली लगायतका भाषा अनुवादक सरकारले नै निशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ । यसअगाडि नै एसाइलम आवेदकलाई भाषा अनुवादकको आवश्यकता परेको खण्डमा आफै शुल्क तिरेर लैजानुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
तर युएससीआईएसले व्यवस्था गरेको अनुवादक आवेदकले नलिएको खण्डमा के हुन्छ? यदि युएससीआईएसले व्यवस्था गरेको अनुवादक आवदेकले लिन अस्वीकार गरेको खण्डमा युएससीआईएसले कुनै राम्रो कारण विना आवेदक उपस्थीत हुन नसकेको ठहर गर्नेछ । त्यसपछि या त उक्त आवेदन खारेज गरिने छ या त उक्त आवेदन अध्यागमन अदालतमा रिफर गरिनेछ ।
त्यस्तै उक्त दिन आवेदकको भाषाको अनुवादक उपलब्ध नभएर कुनै कारणवश युएससीआईएसले व्यवस्था गर्न नसकेमा के हुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा युएससीआईएसले उक्त अन्तरवार्ता स्थगित गरेर अन्तरवार्ताको नयाँ मिति तय गर्ने जनाएको छ । तर यसरी स्थगित गर्दा वर्क परमिटको प्रयोजनका लागि अन्तरवार्ता स्थगित हुनुको कारण आवेदक नभई युएससीआईएस भएको ठहर गरिनेछ । अन्तरवार्ता ढिलो हुनुको कारण आवेदक भएको खण्डमा वर्क परमिट प्राप्त गर्नमा समस्या हुनसक्छ ।
नयाँ नियम अनुशार अबको १८० दिनसम्मका लागि अँग्रेजी नबोल्ने एसाइलम आवेदकले युएससीआईएसमा भाषा अनुवादक लैजानु नपर्ने भएको छ । आवेदकले उसले जान्ने ४७ वटामध्ये एउटा भाषामा अन्तरवार्ता दिन सक्नेछन् । ती ४७ भाषामा नेपाली समेत सुचिकृत गरिएको हो ।